Shir looga hadlayo sare u kaca Afrika - BBC Somali
Shir looga hadlayo sare u kaca Afrika
29 Maajo 2014
Hay'adda Lacagta Adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo IMF, ayaa maanta waxa ay furaysaa shir heer sare ah oo ka dhacaya waddanka Mozambique. Shirka oo halkudhig looga dhigay "Afrika oo sare u kacayso" ayaa waxaa looga hadli doonaa sidii loo sii wadi lahaa heerka sare ee kobaca dhaqaalaha ee ay qaaraddu gaartay sanadihii la soo dhaafay.
IMF ayaa saadaalinaysa in heerarka sare ee koboca dhaqaalaha uu sii socon doono dhowrka sano ee soo socda, celcelis ahaana waxa ay ku sheegtay in koboca uu u dhaxeyn doono boqolkiiba 5 ilaa 6 guud ahaan wadammada Afrika ee saxaraha ka hooseeya.
Agaasimaha Guud ee hay'adda IMF, Christine Lagarde, ayaa sheegtay in horumarradaa la gaarey ay ahaayeen "wax aan horay loo arag". Hasayeeshee waxa ay ka digtay in weli ay jirto saboolnimo aad u daran.
Mid ka mid ah arrimaha ugu waawayn ee Afrikaanka wajahayaan ayaa ah, isu dheeli tirnaan la'aanta ba'an ee dakhliga dadka soo gala. Midakalana waxa weeyaan in hormarka dhaqaale ee dhawaan la gaaray uu ku dhisan yahay shidaalka iyo biraha dhulka laga soo saaro.
In kasta oo hormarkan dhaqaale uu jiro, ayaa haddana faa'iidada ka dhalata aysan inta badan gaarin dadka caadiga ah.
Arrimaha looga doodi doono shirkada IMF ee loogu magac daray "Afrika oo sare u kacayso" ayaa waxaa ka mid noqon doona sidii loo gaari lahaa hormar dadka oo dhan wada gaar iyo si wanaagsan u maamulida kheyraadka dabiiciga ah.